Забур 135 CARS - Nnwom 135 ASCB
monkamfo no, mo Awurade asomfoɔ,
2mo a mosom wɔ Awurade fie,
wɔ adihɔ a ɛwɔ yɛn Onyankopɔn fie.
3Monkamfo Awurade ɛfiri sɛ ɔyɛ;
monto ayɛyie dwom mma ne din, na ɛno na ɛyɛ anisɔ.
4Awurade ayi Yakob sɛ ɔnyɛ ne deɛ,
wayi Israel sɛ nʼadeɛ a ɛsom bo.
5Menim sɛ Awurade so;
Ɔso sene anyame nyinaa.
6Awurade yɛ deɛ ɔpɛ biara,
ɛpo ne emu abunu nyinaa.
7Ɔma omununkum ma ne ho so firi asase ano ba;
ɔsoma anyinam ka osutɔ ho
na ɔma ahum tu firi nʼakoradan mu.
8Ɔkumm Misraim mmakan,
9Ɔsomaa ne nsɛnkyerɛnneɛ ne nʼanwanwadeɛ baa mo mfimfini, Ao Misraim,
de tiaa Farao ne nʼasomfoɔ nyinaa.
10Ɔsɛee amanaman pii
na ɔkunkumm ahemfo akɛseɛ,
11Amorifoɔ ɔhene, Sihon
Basan ɔhene, Og
12na ɔde wɔn nsase maa sɛ agyapadeɛ;
ɔde maa ne nkurɔfoɔ Israelfoɔ.
13Ao Awurade, wo din wɔ hɔ daa.
Ao Awurade wo din ahyeta awoɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu.
14Awurade bɛdi ama ne nkurɔfoɔ
na ɔbɛhunu nʼasomfoɔ mmɔbɔ.
16Wɔwɔ ano, nanso wɔntumi nkasa,
wɔwɔ ani, nanso wɔnhunu adeɛ;
na ahomeɛ nso nni wɔn anom.
19Monkamfo Awurade, Ao Israel fiefoɔ;
monkamfo Awurade, Ao Aaron fiefoɔ;
20monkamfo Awurade, Ao Lewi fiefoɔ;
monkamfo Awurade, mo a mosuro no.
21Momfiri Sion nkamfo Awurade,
monkamfo deɛ ɔte Yerusalem no.
ASCB : Nnwom 135